Ukuhlaselwa kweBots. Ungabakhupha njani kwiSayithi lakho - Semalt Practice
Ukuba unobungozi be-malware okanye i-virus ekhunjulwayo, kufuneka ukuba yi-bot, kwaye kufuneka ulahlekise ngokukhawuleza. Iibhotshi zesoftware ezinokuthi zikwazi ukusulela kalula iinkqubo zakho zeekhompyutheni, izixhobo zokusebenza kunye namadivayisi eselula ngokubanzi. Zisetyenziswe ngabahlaseli ukusabalalisa ugaxekile, ukusabalalisa ukuhlaselwa kwenkonzo nokuqhuba iintlobo zolwaphulo-mthetho kwi-intanethi. Okwangoku, kuyinyaniso ukutsho ukuba i-bots zihlawulwa ingqalelo kunezinto ezibonakalayo kuneentsholongwane, i-rootkits kunye ne-malware - sailboat blue book value. Kodwa ke, iimeko zitshintshile kwaye abaphandi baxela ukuba i-bots inobungozi njengegciwane ne-computer malware. Zingonakalisa iwebhusayithi yakho kwaye zifikelele kwiinkqubo zakho, zichithe idumela lakho kwi-intanethi. Kule nkalo, uJulia Vashneva, uSemalt uMphathi oyiNtloko uMpumelelo weMthengi, uya kukubonisa ukuba wenzeni xa i-bots ihlasela indawo yakho.
Qaphela ii-virus kunye ne-bots
Kubalulekile ukuba uqaphele ii-virus kunye ne-bots. Abanye babo banokuchaphazela iiplati zeWindows ezifana neeRobhothi, amaSabots, ama-Agobots, ii-Wootbots nee-Mobots. Iikhowudi ezimbalwa ziyakuchukumisa isofti sakho seTrojan kwaye ifakwe kwiikhompyutha zakho ngokuzenzekelayo. Benza iingxaki ezininzi, ukubonelela ngeendlela zokuba izigebengu zidibanise idatha yakho kwaye zibambe ulwazi lwakho lomntu. Ukuba unenombolo enkulu yebhobho kwisixhobo sakho, abahlaseli banokuthi bawuthathe ulawulo lwenkqubo yakho, kwaye akunakwenzeka ukuba uwamise lonke..
Njengahlobo ezahlukeneyo zegciwane kunye ne-malware, i-bots ayilula ukuyifumana kwaye ingabangela ezininzi iingxaki kwisixhobo sakho. Ukuba ufuna ukususa kwinkqubo yekhompyutheni, unokulandela ezi zinyathelo ezine ezilula:
Ukusebenzisa i-Windows Task Manager
Kufuneka uqikelele ukusebenzisa umphathi we task Windows ukuba ufuna iisethi ezithile zezicelo. Ukuba awunayo imithombo eyaneleyo yokufumana ezo zicelo, uyacelwa ukuba ungabalandeli kwimithombo engaziwayo njengoko abahlaseli bangayifumana inkqubo yakho yekhomputha ngale ndlela.
Ukukhangela inkqubo yakho
Okwesibini kunye nenye yezinyathelo ezibalulekileyo zichaneka kwinkqubo yakho yekhompyutha. Kufuneka uyenze ukuze uqinisekise ukuba isixhobo sakho sihlala sikhululekile kwiintsholongwane, i-malware kunye ne-bots. Ukusebenzisa ezininzi izixhobo zokukhusela i-anti-virus akubalulekile. Kunoko, kufuneka usebenzise isoftware enye enamandla kwaye ususe iikhowudi kunye nezixhobo ezifanelekileyo.
Ukukhangela izibuko ezivulekileyo
Kufuneka uhlole ukukhuseleka kunye nezibuko ezivulekileyo ukuze uhlale ukhuselekileyo phakathi. Ezinye zezixhobo ezinamandla zokukhangela ziyiNessus ne QualysGuard, enokukunceda ukutshintshela izibini zakho ezivulekileyo nezivaliweyo. Kwakhona, kufuneka uhlole inkqubo yakho kuzo zonke iindidi zegciwane kwaye usebenze ngokukhawuleza ukhuseleko lwenkxaso.
Isinyathelo sokugqibela nesigxina kukuvavanya kwiintsholongwane ze-bot. Oku kunokwenziwa ngokubukela umgangatho wezithuthi oshaya idivayisi yakho. Kufanele ufake ifayile efanelekileyo kuphela, kwaye uzame ukufikelela kwiDashibhodi yakho yeGoogle Analytics ukujonga ukuba sele uqalise ukufumana iihitshi zexabiso okanye cha.
Le ndlela yindlela ebonakalayo kunye neyobuchule enokuthi unamathele kuyo ukuze ulahleke i-bots kunye nezifo zentsholongwane.